သေဆုံးသူနဲ့ ကူးစက်ခံရသူတွေ တရှိန် ထိုး တိုးတက်လာနေတဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ် စ် ရဲ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေ – GuGuGarGar
Shwe | January 30, 2020 | World News | No Comments
တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဟာ လူလူချင်း ကူး စက်နိုင်ပြီး ကူးစက်နှုန်းမြင့်မားတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်…..ဒါကြောင့် တရုတ်အစိုးရကလည်း ဝူဟန်မြို့ကို အဝင်အထွက် ပိတ်ထားပြီး ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေတာပါ….
တစ်ကမ္ဘာလုံး ကလည်း အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ကူးစက်မှု အန္တရာ ယ်ကို စိုးရိမ်တာကြောင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်း ပြုလုပ်နေကြပါတယ်…
တရုတ် အစိုးရအနေနဲ့ ကူးစက်မှုနှုန်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေ ပေမယ့်လည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူလူနာတွေနဲ့ သေဆုံးသူတွေဟာ မြင့်တက်လာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်….ယနေ့ အချိန်ထိ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းတွေအရ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသူ ၅၉၇၄ ယောက်နဲ့ သေဆုံးသူ ၁၃၂ ယောက်ထိ ရှိလာခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်…
အဆိုပါ ကူးစက်မှုနှုန်းထားဟာ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခုနှစ်တုန်းက တရုတ်မှာ ဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ ဆားစ်ရောဂါ ကူးစက်သူလူဦးရေထက်ကျော်လွန်သွားပြီလို့ သိရပါတယ်..
တရုတျနိုငျငံ ဝူဟနျမွို့မှာ ဖွဈပှားနတေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ဟာ လူလူခငျြး ကူး စကျနိုငျပွီး ကူးစကျနှုနျးမွငျ့မားတယျလို့ သိရှိရပါတယျ…..ဒါကွောငျ့ တရုတျအစိုးရကလညျး ဝူဟနျမွို့ကို အဝငျအထှကျ ပိတျထားပွီး ရောဂါကူးစကျမှုနှုနျးကို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ အစှမျးကုနျ ကွိုးစားနတောပါ….
တဈကမ်ဘာလုံး ကလညျး အဆိုပါ ဗိုငျးရပျဈရဲ့ ကူးစကျမှု အန်တရာ ယျကို စိုးရိမျတာကွောငျ့ ကွိုတငျပွငျဆငျမှုတှလေညျး ပွုလုပျနကွေပါတယျ…
တရုတျ အစိုးရအနနေဲ့ ကူးစကျမှုနှုနျးကို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ ကွိုးစားနေ ပမေယျ့လညျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျသူလူနာတှနေဲ့ သဆေုံးသူတှဟော မွငျ့တကျလာနဆေဲဖွဈပါတယျ….ယနေ့ အခြိနျထိ ထုတျပွနျထားတဲ့သတငျးတှအေရ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျခံထားရသူ ၅၉၇၄ ယောကျနဲ့ သဆေုံးသူ ၁၃၂ ယောကျထိ ရှိလာခဲ့ပွီလို့ သိရပါတယျ…
အဆိုပါ ကူးစကျမှုနှုနျးထားဟာ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခုနှဈတုနျးက တရုတျမှာ ဖွဈပှား ခဲ့တဲ့ ဆားဈရောဂါ ကူးစကျသူလူဦးရထေကျကြျောလှနျသှားပွီလို့ သိရပါတယျ..